Ugu yeeridda daanyeer waa "xushmad" ee ma aha "cunsurinimo" - BBC News Somali
Ugu yeeridda daanyeer waa "xushmad" ee ma aha "cunsurinimo"
5 Sebtembar 2019
Lukaku wuxuu ciyaaray kullankiisii labaad ee Inter Milan tan iyo markii uu Manchester United ka soo wareegay.
Koox ka mid ah taageerayaasha Inter Milan ayaa sheegay in daawadayaashii ciyaartii Cagliari ay Romelu Lukaku u muujiyeen "xushmad" markii ay ku tilmaamayeen daanyeer oo hees ay ugu qaadeen.
Qoraal ka soo baxay kooxda taageerayaasha Inter Milan ee Curva Nord waxaa lagu sheegay: "Taageerayaasha reer Taliyaani ma ahan cunsuriyiin", xad gudubkana wuxuu ahaa mid ku kooban ciyaarta.
Waxaa intaa lagu daray: "Waan ka xunnahay in wixii ka dhacay Cagliari aad u maleysay cunsuriyad".
Warqadda furan ee loo diray laacibka u dhashay Belgium waxaa lagu daabacay bogga Facebook ee taageerayaasha, waxaana sidoo kale lagu qoray: "Waa inaad fahantaa in Taliyaaniga uusan la mid ahayd dalalka Woqooyiga Yurub oo cunsuriyaddu ay ka tahay dhibaato dhab ah".
"Waan fahansannahay in adiga ay kuula muuqan kartay cunsuriyad balse sidaas ma ahan. Waxaan gudaha Taliyaaniga ku adeegsanaa 'qaabad' ku kooban 'caawinta kooxdeena' iyo in aan ka careysiino dhinaca naga soo horjeedo; ma ahan cunsuriyad balse waa jahwareerin".
"Fadlan, dhaqankan taageerayaasha Taliyaaniga u arag xushmad ah in ay ka baqayaan goolasha aad dhaliso, balse aysan ahayn dad ku faquuqaya."
Barfuum buuq badan ka dhaliyay Israa'iil
Wiilkii cunsuriyadda diiday ee caan baxay
Lukaku, oo sheegay in ciyaarta aysan si wanaagsan u socon ka dib "ereyadaas xadgudubka ah", wuu istaagay wuxuuna indhaha u taagay dhanka shabaqa goosha gadaashiisa ah oo ah meesha ay ereyada ka bilowdeen ka dib markii uu dhaliyay goolkii guusha.
War qoraal ah oo ka soo baxay kooxda Cagliari waxaa lagu sheegay in "la garandoono, garoonkana laga mamnuuci doono shaqsiyaadka jaahiliinta ah ee ficilkooda ashaxa xun uu guud ahaanba ka soo horjeedo qiyamka Cagliari Calcio".
Ururka Kubbadda Cagta ee Ruushka oo loo ganaaxay cunsurinimo
Maxaa loo hadal hayaa haweenka Sucuudiga ee loo ogolaaday inay ku biiraan milateriga?
Dhul go' banaanka u soo saaray meydad ku aasnaa qabuuro 100 sano jiray
Hadal heyn ka dhalatay wasiir xanuunsanaa oo shir jaraa'id qabtay
Doorashada Soomaaliya: Puntland oo shuruudo ku xirtay shirka Muqdisho